Nanjavona Indray Ny Filoha Ao Nizeria, Ary Te-hahafantatra ny Antony Ireo Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Español, English
Filoha Nizeriana , Muhammadu Buhari. Sary Creative Commons avy amin'ny Sampam-baovao Tasnim .
Narary tato ho ato ny filoha Nizeriana Muhammadu Buhari ary tsy hita tamin'ny asa-panjakana maro izy. Tamin'ny volana Martsa, niverina avy any amin'ny Fanjakana Britanika i Buhari rehefa avy niala sasatra noho ny fitsaboana nandritra ny fito herinandro kanefa nitsikafona ny fanontaniana momba ny fahasalaman'ilay filohan'ny firenena be mponina indrindra ao Afrika rehefa tsy tonga nanatrika ny fivorian'ny mpanatanteraka federaly izy tamin'ny 12 Aprily.
Araka ny gazety ThisDay, niteraka ahiahy mihitsy aza ny “fanjavonan'i Buhari miharihary” fa nalefa any ivelany indray izy na dia nandà izany tsaho izany aza ny governemanta .
Nitohy hatrany ny vinavina, na izany aza, rehefa tsy hita tao amin'ny fivorian'ny kabinetra i Buhari, ny herinandro nanaraka. Niezaka ny hampitony ny vahoaka ny minisitry ny fampahalalam-baovao, Lai Mohammed, tamin'ny filazana fa ” miasa hatrany an-trano” ny filoha.
Nitarika ho amin'ny fanontaniana bebe kokoa momba ny toerana misy an'i Buhari sy ny fahasalamany ny fanazavana.
Fivorian'ny FEC iray hafa tsy misy ny Filoha … Inona indray no fialan-tsiny amin ‘izao ??
Avy eo, ny Zoma manaraka, tsy nanatrika ny vavaka Zoma Jumat tao amin'ny Tranoben'ny Filoham-pirenena Aso Rock ny filoha .
Tsy tonga tao amin'ny vavaka Zoma androany i Buhari – izay heveriko fa tsara ny milaza fa tena marary izy.
Nangataka ny vaovao marina momba an'i Buhari ny vahoaka rehefa nihamaro ny tsy fahatongavana. Nanontany ny Profesora Wole Soyinka, mpandresy tamin'ny Loka Nobel Literatiora taona 1986 hoe : “Nahoana no manafina ny momba ny fahasalamany ny filoha ?”
Tokony hampahafantatra ny mikasika ny fahasalamany ho an'ny besinimaro ny filoha Buhari – Wole Soyinka Jereo ny Lahatsary Feno ato:https://t.co/KEAQOCnxsO pic.twitter.com/oRUfXhav9T
Manaraka, nampitandrina i Sefo Bisi Akande, mpitari-draharahan'ny antokon'i Buhari teo aloha, fa manao ” fetibe” ny manampahefana sasany noho ny toe-draharaha ara-pahasalaman'ny filoha, ary nilaza fa “mety hampihitsoka ny firenena iray manontolo amin'ny fahavoazana tsy azo ialàna” ny fanjavonany tsy ho hitan'ny besinimaro ary nampitandrina ireo izay maniry ny hijinja tombony ara-politika avy amin'ny fahasalaman'ny filoha ” izy.
Mandritra izany fotoana izany, nampiasa ny tenirohy #LasaaizaiBuhari ireo mpisera aterineto Nizeriana, nitaky hahita ny filohany:
Fahamenaram-pirenena ho an'ny Nizeriana amin'ny fanaparitahana ny tenirohy malaza mba hahitana fotsiny ny Filohany na hahazo vaovao momba azy.
Efa volana May 2017 izao, tsy manana teti-bola izahay, olona tsy ao tsara izahay…
Mitady ny Filohanay ihany koa izahay…
Raha toa ka tena marary i @MBuhari, dia aoka izy hanao fialan-tsasatra hitsabo tena. Mbola zava-dehibe kokoa ny fahasalamana noho ny fananana.
“Tokony hahafantatra ny toe-pahasalaman'i Buhari ny Nizeriana, tsy haharitra ny hamafin'ny asa ny taonany sy ny fahasalamany”
Naneho ny tsy fahafaham-pony manokana ny mpisera Twitter sasany, tahaka ity iray eto ambany ity tamin'ny filazana fa “miasa hatrany an-trano” fotsiny i Buhari .
Tsy orinasa an-tserasera i Nizeria ka afaka tantanina any an-trano
Niantso hanaovana hetsi-panoherana ao amin'ny firenena ny hafa :
Aiza ireo rehetra tia an'i Nizeria? Tamin'ny taona 2010 NANAO DIABE ISIKA . Ankizilahy, ankizivavy, lehilahy, vehivavy,Miozolomana, Kristianina … NANAO DIABE ISIKA!
Nanao diabe ianareo rehefa narary i Yar'Adua, mizotra mankany amin'ny maherifo, kanefa ny olonao tsy mitarika ny FEC? Na miseho amin'ny vahoaka
Nampahatsiahy ny fihetsiky ny antoko eo amin'ny fitondrana nandritra ny aretin’Itompokolahy Filoha Umaru Musa Yar'Adua ilay mpisera Twitter Tmak :
Mitaky porofo momba ny fahasalaman'i Yar'Adua ireo mpanohitra Nizeriana Anjaranao indray izao?
Tsy mety milaza ny marina momba ny fahasalaman'ny filoha ny mpanao politika masina rehetra. Kanefa nanao diabe teo ambony lohan'i Yar'Adua izy ireo 😊
Maty tamin'ny taona 2010 ny filoha Umaru Musa Yar'Adua rehefa niady tamin'ny areti-po nandritra ny volana maro. Nitarika ho amin'ny mahababangoana ny fahefana sy krizy politika tatỳ aoriana ny tsiambaratelo manodidina ny aretiny. Na dia teo aza ny fepetran'ny lalàmpanorenana momba ny famindram-pahefana rehefa lasa tsy afaka miasa ny filoha, dia nanakana azy tsy hametra-pialana ny mpanolo-tsainan'i Yar'Adua. Fa nampiely ny fandisoam-baovao momba ny fahasalamany kosa ireo “mpiray tsikombakomba” tetsy andanin'izany..
Nangataka ny governemanta mba hamokatra ” porofo mivaingana ” tamin'ny alalan'ny lahatsary mampseho an'Atoa Yar'Adua marary teo am-pandrianan'ny hopitaly nony avy eo ny antoko mpanohitra tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny, Lai Mohammed. Toa efa nanadino izany vahaolana izany Atoa Lai Mohammed, izay mpitondra tenin'ny governemanta ankehitrin , vahaolana izay narosony tamin'ny zava-nitranga toy izany fito taona lasa izay.
Mazava ho azy, nahita hatsikana tamin'ny fanjavonan'ilay mpitondra tao Nizeria farany ny mpisera Twitter sasany :
Ary na dia holazainao amin'ny Nizeriana aza fa salama sy matanjaka tsara i Buhari
Narary kely ny tratrako rehefa nahita ity aho
Raha namahana bilaogy tao amin'ny Medium ilay mpanoratra Nizeriana Tunde Leye dia nampitandrina fa mety hiteraka fahavoazana lehibe ity fanaovana an-tandrevaka vaovao momba ny fahasalaman'ny filoha ity, sady nilaza izy fa efa misy mpitondra fivavahana Miozolomana sasany no manameloka sahady ny Kristianina ho “nanampoizina” an'i Buhari. “Nisy polisy mihitsy aza nilaza ampahibemaso fa hamono olona miisa 200 izy raha maty ny Filoha Buhari,” hoy i Leye nanoratra.